SHAAHA HIBISCUS (HIBISCUS): WAA MAXAY, WAA MAXAY DHIBKA IYO SIFOOYINKA FAA'IIDO LEH EE KARKADE FOR CAAFIMAADKA, XEERARKA LAGU CABO KA SOO UBAX - GURI, GURI
Caato ah, faa'iido leh, la awoodi karo. All oo ku saabsan shaah hibiscus
Hibiscus (Hibiscus) - dhirta Malvovye qoyska, laga helo badanaa qaabab geedo ama xoortay. Hindiya waxaa loo tixgeliyaa goobaha ugu badan ee noocyada iyo noocyada hibiscus. Hibiscus waxay caan ku tahay hantideeda faa'iido leh, oo ay ka mid tahay xaqiiqda ah in loo isticmaali karo cabitaanka shaaha - Karkade, dhadhan fiican leh, nadiif ah oo aad u faa'iido leh. Maxay tahay iyo sida shaaha waxtarka leh loo isticmaalo, iyo sidoo kale sida loo kobciyo biyaha Suudaan naftaada iyo sida aadan u qaldamin marka aad iibsanayso caleemo diyaar ah, waxaan eegaynaa maqaalkan.
Waa maxay nooca dhirta loo isticmaalo in la cabo?
Kala duwanaanshaha hibiscus ee adduunka ku koraa badan oo badan, xaalad ahaan waxay u qaybsan yihiin gudaha gudaha iyo duurjoogta. Noocyo soodhaweyn ah ayaa u fiican sida sheyga gudaha ah, laakiin shaah ma shaqeyn doonto. Kala duwanaanta cabitaankani waa Hibiscus sabdariff ama Rosella. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa koritaanka Sudan.
Useful iyo bogsiinta sifooyinka shaaha:
Waxay leedahay bakteeriyada bakteeriyada, duriinka, antipyretic.
Waxay ka qaadaa sunta iyo cusbada biraha culus jirka.
Caadi ahaan habka dheef-shiidka.
Waxay ka caawisaa xoojinta derbiyada xididdada dhiigga.
Miyuu yahay antispasmodic?
Wuxuu ka digayaa muuqaalka kaansarka malignantiga ah.
Waxay xoojisaa nidaamka difaaca, waxay xawaaraysaa habka bogsashada.
Waxay ka hortagtaa dhacdooyinka hargabka iyo cudurada viral.
Saameynta wanaagsan ee muuqaalka maqaarku, waxay sii yaraanaysaa habka gabowga.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan faa'iidooyinka shaaha karkad:
Halbeegga kiimikada ee cabitaanka ka soo hibiscus:
In kabadan daraasad amino acids ah, oo 6 ka mid ah ay muhiim tahay.
Acid Nicotinic iyo asidsorbit, asids ka yimid asalka organic.
Vitamiin ee kooxda B, A iyo R.
Macro iyo walxaha raadraaca (fosfooraska, calcium, birta, iwm.).
Acids ee halabuurka waxay burburin kartaa dhaldhalaalka ilkaha - waxa fiican in la cabo shaah hibiscus iyada oo gargaar ka ah caws. Isticmaalka badan ee shaaha waxay kordhin kartaa kiimikada cabitaanka gastric, sidaa darteed dadka qaba xanuunka gasras (oo leh kiimiko) ama boogaha waa inay xaddidaan cabbirka cabitaanka.
Dhagaxyada ku jira kaadi mareenka ama saliingaha.
Uurka, xilliga nuujinta.
Maqnaanshaha xasaasiyadaha xasaasiyadda.
Cudurada habka neefsiga.
Qabow iyo qabow.
Xanuunnada wareegga caadada.
Xadgudubyada nidaamka wadnaha.
Xeerarka sameynta cabitaanka dhirta
Dooro qalabka wanaagsan. Badeecad tayo sare leh waa inaysan ka koobnayn budada la qalajiyey ubaxyada, iyo inflorescences iyo tufaaxa Rosella.
Biyaha digaagu waa inay jilicsan yihiin.
Cabitaanka khamriga si sax ah u dhajinta dhoobada ama muraayadda - qalabka kale ayaa dhali doona dhadhanka shaaha.
Hababka ugu caamsan ee alxanka:
Qabow - ku haboon daaweynta hibiscus. Marka maqnaanshaha biyaha la karkariyo, geedka ayaa haya dhammaan guryaha dawooyinka. 2 qaado shaah oo qallalan oo qallalan waxay u baahan yihiin inay ku shubaan 300 ml oo biyo nadiifa ah. Ku adkeyso 2.5-3 saacadood.
Hot - Qadarka isku mid ah ee inflorescence qalalan ku shub 300 ml oo biyo ah karkaraya, daboolo suxuunta, ku adkeyso 5-7 daqiiqo. Cab kulul.
Karinta - Ku shub 3 qaado oo ubax ah ee suxuunta, ku shub biyo si aad u dhalaaliso, isku kari kuleylka kulaylka yar, kari 4 daqiiqo iyo 40 ilbidhiqsi.
Waa muhiim! Cabbitaanka si sax ah loo diyaariyey wuxuu yeelan doonaa mid ka mid ah midabada midabka casiirka ah, dhadhan wanaagsan iyo caraf udgoon. In shaaha waxaad ku dari kartaa geedo kale oo faa'iido leh, malab, oo dhir udgoon, baraf jajabiyey.
Waxaan kuugu soo bandhigi doonaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan sida loo soo saaro shaah karkad:
Hababka helitaanka alaabta ceeriin ah
Horumarinta ubax guriga
Waa suurtogal in la koro hibiscus dhul furan kaliya oo ah waddooyinka koonfureed.tan iyo dhirta tani waa kulaylka. Heerkulka hoose wuxuu burburin doonaa. Si madaxbanaan, kor u kaca Suudaan ayaa badanaa lagu koray qolka.
Noocyada sii kordhaya.
Flowerpot. Hibiscus waxay u baahan tahay awood ballaaran oo deggan. Marka aad dooranayso maaddo, mudnaanta waa in la siiyaa dhoobada.
Ground. Waxaad iibsan kartaa isku darka ciidda diyaarka ah ama diyaariya adigoo raacaya nidaamka soo socda: humus, ceelka webiga, dhulka caleenta, dhulka caleenta ah ee saamiga 1: 1: 1: 1. Ka hor inta aanad si toos ah u isticmaalin ciidda, waxaa lagula talinayaa in dabka lagu shido ilaa 50 daqiiqo foornada si loo burburiyo bakteeriyada waxyeellada leh iyo cayayaanka. Caddaan ama dhagax la jajabiyey ayaa lagu shubay hoose ee dheriga sida dheecaan.
Kala bedelka. Warshad dhalinyaro ah (illaa 3 sano) ayaa sanad walba la kexeeyaa, qof weyn - hal mar 3 sano. Xaaladaha da'doodu ka weyn tahay 10 sano, waa ku filan tahay in lakabka lakabka sare lagu beddelo.
Gooyo. Caleemaha dhalinyarada waxay u baahan yihiin inay si joogto ah u dhuujiyaan - taa darteed, dhirta ayaa laanta si fiican u fiicnaan doonta, waxaana jiri doonta burooyinkeeda ubax badan.
Nalalka. Hibiscus waa wax aan waxtar u lahayn iftiinka, laakiin marka ay jirto wax yar oo qorraxda, waxaa jiri kara dhibaatooyin ubax ah. Xilliga duhurka, Rosella waxay u baahan tahay inay bixiso shoog.
Heerkulka. Hibiscus si nolol raaxo leh waa in ay ahaato mid diirran - laga bilaabo 22 illaa 27 darajo Celsius korka eber.
Nidaamka waraabka. Xilliga xagaaga, waraabinta waa in ay ahaataa mid aad u badan, iyo xilliga qaboobaha - dhexdhexaad ah. Biyaha loo isticmaalo waraabinta waa diiran, ka hor inta aan la difaacin.
Bacriminta. Si loo barbar dhigo Suudaan wuxuu ahaa mid rabshado wata, waxaa lagama maarmaan ah in muddo ah (xagaaga - inta badan, xilliga qaboobaha - marar badan) si aad u bacrimiso. Dharka ugu sarreeya waa inuu doorto mid gaar ah (for hibiscus), ama dhirta inta lagu jiro ubax.
Nafaqeynta. Hibiscus waxaa lagu faafiyaa by gooyn ama abuur.
Haddii ujeedada kordhinta rosella waa in la helaa alaabta ceeriin ah ee shaaha, ka dibna waa inaad si gaar ah u taxadartaa dhirta inta lagu jiro ubax iyo kahor - sii fudud (laakiin ka ilaali qorraxda tooska ah), ka ilaali qoraalada, ha iloobin waqtigii goynta, biyo badan (laakiin maaha xad-dhaaf ah), ku buufin caleenta biyaha, adigoo si joogto ah ugu dabaq bacrimin.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan dhalmo iyo beerista hibiscus, waxaan soo jeedinaynaa in ay halkan ka akhriyaan, iyo halkan waxay u sheegay oo ku saabsan daryeelka ee hibiscus.
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa inaad daawato fiidiyowga ku saabsan daryeelka koonfurta Sudan:
Iibsiga alxanka dukaanka ama farmashiyaha: shuruucda doorashada
Qoryaha la qalajiyey iyo inflorescences waa inay ahaadaan kuwo gebi ah, oo aan dhulka ku jirin.
Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u leedahay waddanka asal ahaan ka soo jeedo - waa inaad joojisaa doorashadaada Suudaan, Mexico, Hindiya, Shiinaha, Masar ama Sri Lanka - waxay siiyaan qalabka tayo sare leh.
Waa inaadan ku kalsooneyn shirkadaha aan la garanayn - maadadaha ama wax lagu daro wax lagu kariyo ayaa laga yaabaa inay joogaan qeyb ka mid ah alaabtooda.
Biyaha digaagga laguma talinayo in la iibsado - waxay u badan tahay in horeba loo rogay qashin.
Iftiin ama hoos madow oo madow oo muujinaya tayada hoose ee alxanka, joogitaanka nijiyada.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada alaabta iibsatay
Qiimaha macquul ah.
Waqti la'aanta iyo taxaddar la'aanta beerashada madax bannaan ee alaabta ceeriin, daryeelka dhirta.
Fursad aad ku iibsato qadar weyn oo shaah ah.
Waa suurtogalnimada helitaanka been abuur.
Waxyaabaha qashinka ah waxay noqon karaan kuwo waayeel ah ama ay waxyeelo u geysteen gaadiidka, taas oo saameyn ku yeelan doonta dhadhanka iyo tayada daawada ee cabitaanka dabiiciga ah.
Qiimaha gawaarida ee Moscow waa inta u dhaxeysa 40 illaa 1916 riwaayad, kharashka safafka Suudaan ee St. Petersburg waa 60-2495 roon. halkii baako.
Qiimuhu wuxuu ku xiran yahay tayada alaabta, qaabka loo sii daayo, wadanka dhoofisa iyo miisaanka waxyaabaha ku jira baakadka.
Waxaad sidoo kale ka akhrisan kartaa maqaaladaha hibiscus soo socda:
Cudurada iyo cayayaanka hibiscus.
Miyaan guriga ku hayn karaa hibiscus?
Karkade - cabitaan dabiici ah oo caadi ahisku dhafka ariga hodanka leh, dhadhanka iyo tayada daaweynta ee faa'iido leh (ku saabsan sida caruusku uga duwan yahay hibiscus, halkan ka akhri, iyo qodobkan waxaad ka baran kartaa sifooyinka wanaagsan iyo waxyeelada dhirta). Dadku waxay ugu yeeraan daaweyn dhammaan cudurada. Isticmaalka joogtada ah ee shaaha hibiscus ayaa gacan ka geysanaya sidii uu ula qabsan lahaa dhibaatooyin badan oo jidhka ah, sii xoojiya oo keeno cod.